Tiraamp haasaa Kongireesii biyyattiif taasisaniin Ameerikaaf yeroon geesseetti jedhan - BBC News Afaan Oromoo
Tiraamp haasaa Kongireesii biyyattiif taasisaniin Ameerikaaf yeroon geesseetti jedhan
Pireezidaantiin Ameeerikaa Doonaald Tiraamp haasaa waggaatti si'a tokko ji'a Amajjii keessa koongireesii biyyattiif taasifamu irratti 'Ameerikaaf yeroon geesseetti' jedhan.
Haasaa isaanii kanaan Pireezidaantiin paartii Riipaablikaanotaa Tiraamp, warraa paartii Deemokraatotaa waliin ta'uun hojjechuuf balballi keenya banaadha jedhaniiru.
Pireezidaant Tiraamp Murtee bara bulchiinsaa Baarak Obaama mana hidhaa Guwaantanamoo cufuuf murta'ee ture keessa deebi'uun Guwaantanamoon banaa ta'a jedhaniiru.
Diinagdeen Ameerikaa guddinarra kan jiru ta'uus, fudhatamni Tiraamp namoota hedduu biratti qaban ammas gadi aanaa dha.
Pireezidaant Tiraamp buulchiinsi koo 'Ameerikaa tasgabboofte, cimtuu fi ofiin boontu ijaaraa jira' jedhaniiru.
Goodayyaa suuraa Giifti duren Ameerikaa Meelaniyaan abbaa warraa isaanii waliin miti bakka yaa'ii sanii kan gahan
Haasaa Seera Baastota biyyattiif taasisan kanaan Tiraamp 'Ameerikaan abjuushe akka jiraachuu eegaltuuf yeroo mijataan hin turre' jedhaniru.
Waltajjii waliigaluun akka biyyaa tokko, uummata tokko fi maatii Ameerikaa tokko haataanu irratti jedhanii dhaamsa dabarsan kana namoonni miiliyoona 40 ta'an karaa televizhiinii ni hordofu jedhamee tilmaamameera.
Turtii isaanii Waggaa tokko Waayit Haawos keessatti Hariiroo hunda galaa qaamolee hiree biyyatti keessatti gahee qaban waliin osoo hin raawwatiin hafan amma cimsuuf fedha akka qabanis beeksisaniiru.
Pireezidaantichi daa'imman dabalatee godaantota seeraan ala biyyatti galaniif sirna eeggannoon itti godhamu addaan kutanii Deemookraatota mufachiisanii turan kun ammoo hariiroon waliin qaban akka laaffatu shoora baheeera.
''Guyyaa har'aa partilee lameen Demooktaatotaa fi Ripaablikaanoota waliin ta'uun laammiilee keeenya hunda sanyii, halluu gogaa isaanii fi amantaa hordofaniin osoo hin qoodiin of eeggannoo gochuuf balballi keenya banaa dha, waliinis ni hojjenna'' jechuun beeksisaniiru.
Daandiiwwan konkolaataa dulloomoo akka haaromsani fi tajaajiloota biroos akka diriirsan waadaa galaniiru.
Diinagdeen Ameerikaa kufaatii baroota dheeraa irraa bayyanachaa jira. Hojii dhabdummaan biyyattis waggoota 17 keessatti akka alanaa hir'isee hin beeku.
Hojiilee hojjechaa jiraniif beekamtiifi kabajni kennamaafii akka hin jirre kan komatan Pireezidaant Tiraamp, erga aangoo qabatanii as carraalee hojii miiliyoona 2.4 uumuu akka danda'an ni dubbatu.